Soomaali waxa mideeya kabadan waxay isku diidanyihiin .
Sunday July 04, 2021 - 17:44:22 in Maqaallo by Wariye Tiriko
Fanka ,suugaanta ,fanaanka,macalimiinta iyo dhamaan dadka Hal-abuurka iyo hibada lehba (Arts) waa ku dulmanyihiin Somaliland .
Somalia-na haba taagdaraatee hanbalyey mudantahay talaabada ay xaga afka iyo horumarintiisa u qaadey.
Cid udhaqaaqda ,ka warhaysa,waxtarta ,ka faa,ideysata usoo jeeda majirto markhaatina uma baahna ,aduunyada kale waa la buunbuuniya waa la ciseeyaa hanti,sumcad iyo iyo ixtiraambay ku dhex leeyihiin ummdaas ay ka yimaadeen ama la noolyihiin haba kala hayb ahaadaane.
Waa fadeexad iyo ceeb dul hoganaysa xukuumada somaliland ee talinaysa in dad noocaas ahi maalinwalba hibadaa la dhintaan iyadoon waxba laga weelayn .
Xikmad weyn oo ingiriisi ahayd ayaa macnaheedu ahaa ‘’markastoo qofweyni dhinto waxay lamid tahay iyadoo libarary -weyni gubtay” ,hadaba taa maanta ee ugu danbaysey ee yuusuf shaacir lagu magacaabay wakhtigeedii ayay timid waana ku saxanyahay wasiirkaasi somaliland-na waa la gudboonayd haseeyeeshe lama garansiin sabab ay maanta uga hadlaana uma furna.
Hal abuurka iyo inta la halmaashaba dayac badanbay tirsanayaan iyagoon cidi dirsan ayey is direen ,dedaaleen, wakhtigoodii ,fikirkoodii iyo tamardoodiibay ku qabteen shaqadii dawladaasi lahayd in la hanbalyeeyo lamaamuuso ayey mudanyihiin .
Dawlada somaliland ka talisa masuuliyad dheerada oo ka saarnayd afka iyo dayactirkiisa ayey dhayalsatey waqoyina awalba Hal-abuurka wuu kasoo bixi jirey koonfurbaa se manaafacadsanjirtey.
Ugu danbayntii waa ku saxanyahay yusuf shaacir inuu aqbalo soo dhaweeyo lashaqeyo waliba wakhti galiyo si ,ay uga midha dhaliyaan hawsha loo igmadey. waa xalaal ereyga ay ku maamuseen ee ah xeeldheere afka iyo dhaqanka Somali ah ,waana u uqalmaa .waa shimbir ilaahay u direy afkaas wakhtigii iyo dedaalkii uu galiyeyna ka muuqdo.